Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Imaatinka booqdaha Hawaii iyo kharashka ayaa hoos u dhacay Sebtembar
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • saaciday inay • kariska • Entertainment • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Imaatinka booqdaha Hawaii iyo kharashka ayaa hoos u dhacay Sebtembar.
Kharashaadka booqdayaasha ee Hawaii ee Sebtembar 2021 ayaa hoos u dhacay 15.4 boqolkiiba ka hor masiibada Sebtembar 2019 iyo imaatinka booqdeyaasha ayaa ka hooseeya Sebtembar 2019.
Wadarta kharashka ay ku bixiyeen booqdayaasha gobolka ka baxsan ee yimid Hawaii Sebtembar 2021 waxay ahayd $1.05 bilyan.
Kahor masiibada caalamiga ah ee COVID-19 iyo shuruudaha karantiil ee Hawaii, Hawaii waxay gaadhay kharashaadka booqdayaasha iyo imaatinka heerkii ugu sarreeyay 2019 iyo labadii bilood ee ugu horreeyay 2020.
Isugeyn 505,861 booqdayaal ah ayaa ku yimid adeegga hawada Jasiiradaha Hawaii Sebtembar 2021, ugu horrayn waxay ka yimaadeen Galbeedka Mareykanka iyo Bariga Mareykanka.
Marka loo eego tirakoobka booqashooyinka hordhaca ah ee ay soo saartay Waaxda Ganacsiga, Horumarinta Dhaqaalaha iyo Dalxiiska (DBEDT), wadarta kharashka ay ku bixiyeen booqdayaasha u yimid Hawaii ee September 2021 wuxuu ahaa 1.05 US dollar.
Kahor masiibada adduunka ee COVID-19 iyo HawaiiShuruudaha karantiil ee dadka socotada ah, Gobolka Hawaii waxa uu gaaray heerkii ugu dambeeyay kharashaadka soo-booqdayaasha iyo imaatinka sanadka 2019 iyo labadii bilood ee ugu horreysay 2020. xayiraadaha COVID-2020. Sebtembar 19 Kharashaadka booqdayaasha ayaa ka hooseeya $2021 bilyan (-1.25%) la soo sheegay Sebtembar 15.4.
Wadar dhan 505,861 booqdayaal ayaa ku yimid adeegga hawada Jasiiradaha Hawaiian Sebtembar 2021, ugu horrayn waxay ka yimaadeen Galbeedka Maraykanka iyo Bariga Maraykanka. Marka la barbardhigo, kaliya 18,409 booqdayaal (+2,647.8%) ayaa hawada ku yimid Sebtembar 2020 iyo 736,155 booqdayaal (-31.3%) waxay ku yimaadeen hawo iyo maraakiib dalxiis Sebtembar 2019.
Sebtembar 2021, rakaabka ka imanaya gobolka ka baxsan waxay dhaafi karaan is-karantiilnimada khasabka ah ee 10-ka maalmood ee Gobolka haddii si buuxda loogu tallaalay Maraykanka ama natiijada tijaabada COVID-19 ee NAAT oo sax ah oo ka timid lammaane Tijaabo la aamini karo ka hor bixitaankooda barnaamijka Safarrada Badbaadada ah. Agoosto 23, 2021, Hawaii Gudomiye David Ige ayaa ku booriyay dadka safarka ah inay yareeyaan safarka aan muhiimka ahayn ilaa dhamaadka bisha Oktoobar 2021 sababtuna tahay kororka kiisaska kala duwan ee Delta oo culays ku saaray xarumaha daryeelka caafimaadka ee gobolka iyo agabka. The Xarumaha Mareykanka ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) sii waday in lagu dhaqan geliyo xannibaadaha maraakiibta socdaalka iyada oo loo marayo "Amarka Shiraaca Shuruuda ah", oo ah qaab weji leh oo dib loogu bilaabayo doomaha rakaabka si loo yareeyo khatarta faafitaanka COVID-19 ee dusheeda.
Celcelis ahaan tirakoobka maalinlaha ah wuxuu ahaa 154,355 booqdayaasha Sebtembar 2021, marka la barbar dhigo 20,472 Sebtembar 2020, marka loo eego 206,169 Sebtember 2019.